I Elisa na Elisea dia mpaminany resahina ao amin'ny Testamenta Taloha, indrindra ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka. Avy amin'ny teny hebreo hoe אלישע / Elisha izay azo adika hoe "Nanampy Andriamanitra" ny anarany. Tamin'ny fotoana nampisy korontana sy nanapahan'ireo mpanjaka nandimby an'i Solomona (na Salômôna) izay nirona tamin'ny fanompoan-tsampy sy tamin'ny fanaranam-po isankarazany no tena niasan'ny mpaminany Elisa sy ny mpaminany Elia izay nananatra ireo mpanjaka ireo ny mba hiverina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka hiala amin'ny fivavahana amin'ireo andriamanitry ny firenen-kafa toa an'i Baala sy i Astarte.
Ny mpaminany Elisa manangan-ko velona ny zanakalahin' ilay vehivavy sonamita
Fitantarana ao amin' ny BaibolyModifier
Voaresaka fohifohy ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka i Elisa izay notendren'i Elia ho mpianany. Tsy misy filazana an'i Elisa ny toko alohan'ny faha-2 ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka izay mitantara ny nampakarana an'i Elia ho any an-danitra tamin'ny alalan'ny kalesin'afo. Aorian'io ny fitantarana ny asan'i Elisa sy ireo fahagagana samihafa nataony hatramin'ny toko faha-9. Tantaraina ao amin'ny faran'ny toko faha-13 ny fahafatesan'i Elisa sy ny fandevenana azy.
Nandimby an'i Elia i Elisa nandritra ny fanjakan'i Jorama zanak'i Ahaba (na Akaba), mpanjakan'i Israely. Nanatanteraka ny asa maha mpaminany azy i Elisa nanomboka tamin'ny nampakarana an'i Elia tany an-danitra, ka naharitra dimampolo taona izany, tao amin'ny Fanjakan'i Israely, tamin'ny fotoana nanjakan'i Jorama sy i Jeho sy Joahaza (na Joakaza) ary i Joasy (na Joasa). Tsy tamin'ny Israelita ihany no nifantohan'ny asany fa tamin'ny vahoaka hafa koa. Maty i Elisa tokony ho tamin'ny taona 800 tal. J.K.
I Elisa sy ireo mpanompony, araka ny lovantsofina, dia nisy fotoana nitoerany tanaty zohy tao amin'ny tendrompbohitra Karmela mba hanome fampianarana ireo mpianany. Hita amin'ny andalana ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka izay milaza fa nankeny amin'ny tendrombohitra Karmela ilay vehivavy Sonamita dia mety manamarina izany lovantsofina izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Elisa&oldid=1001948"
Dernière modification le 4 Martsa 2021, à 09:20
Voaova farany tamin'ny 4 Martsa 2021 amin'ny 09:20 ity pejy ity.